धादिङ्गको मानेडाँडामा ट्रिपर दुर्घटना, ३ जनाको मृत्यु, ३ गम्भीर , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
धादिङ्गको मानेडाँडामा ट्रिपर दुर्घटना, ३ जनाको मृत्यु, ३ गम्भीर
काठमाडौँ । धादिङ्गको लामिडाँडामा बा ५ प २४१८ नम्बरको ट्रिपर दुर्घटना हँदा ३ जनाको ज्यान गएको छ भने ३ जना घाईते भएका छन्।
धादिङ्गको भिसेनस्थानबाट चक्रमतितर्फ जाँदै गरेको ट्रिपर सडकबाट तल खस्दा तीन जनाको घटनास्थलमै ज्यानगएको हो भने एक बच्चा सहित ३ जना घाईते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा थाक्रे १० का ३२ वर्षीय महेश तामाङ, सोही ठाउँका ५० वर्षीया सावित्री तामाङ र ६० वर्षीया सोममाया तामाङ रहेको छन्।
यसैगरी घाईते हुनेमा गटिपर चालक हरेन्द्र तामाङ, टेकबहादुर तामाङ र चारवर्षीया बालिका रहेका छन्। उनीहरुको स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भईरहेको प्रहरीले जनाएको छ। टिपर सडकबाट ५ सय मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ।